Micrometer: ဒီ tool အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သမျှ အခမဲ့ hardware
၎င်းသည်အလျားယူနစ်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်း၊ micrometer ငါတို့ဒီမှာရည်ညွှန်းတာကနာမည်တူရိယာတစ်ခုပဲ။ ၎င်းကိုလည်းလူသိများသည် palmer gaugeမည်သည့်အတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ထုတ်လုပ်သူရဲ့အလုပ်ရုံ ၎င်းသည်အခြားတူရိယာများမလုပ်နိုင်သောအရာကိုကြီးကြီးမားမားတိကျမှန်ကန်စွာတိုင်းတာခွင့်ပြုသောကြောင့်သို့မဟုတ် DIY ကိုစိတ် ၀ င်စားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းအကြောင်းနည်းနည်းပိုလေ့လာလိမ့်မယ် ဘာအတွက်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲမင်းရဲ့အနာဂါတ်ပရောဂျက်တွေအတွက်ကောင်းကွက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့သော့ချက်တွေအပြင်…
1.3 palmer micrometer သို့မဟုတ် caliper ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
El micrometer (သို့) Palmer caliper၎င်းသည်အလွန်တိကျသောတိုင်းတာရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နာမည်အကြံပြုသည့်အတိုင်း၎င်းကိုအလွန်သေးငယ်သောအရွယ်အစားရှိသောအရာများအားတိကျမှုနှင့်တိုင်းတာရန်သုံးသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်အနည်းဆုံးအမှား (၀.၀၁ မီလီမီတာ) သို့မဟုတ်မီလီမီတာတစ်ထောင် (၀၀၀၁ မီလီမီတာ) အထိတိုင်းတာနိုင်သည့်အနည်းဆုံးအမှားတစ်ခုရှိတတ်သည်။
သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကမင်းကိုအများကြီးသတိရစေလိမ့်မယ် caliper သို့မဟုတ် caliper သမားရိုးကျ တကယ်တော့၊ ၎င်းအလုပ်လုပ်ပုံသည်အလွန်ဆင်တူသည်။ တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရန်ဘွဲ့ရစကေးဖြင့်ဝက်အူကိုသုံးပါ။ ဤကိရိယာများသည်တိုင်းတာရန်အရာဝတ္ထု၏အစွန်းများကိုထိပြီး၎င်း၏စကေးကိုကြည့်လျှင်တိုင်းတာမှုရလဒ်ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့မှာအနိမ့်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးရှိတယ်၊ ယေဘူယျအားဖြင့် ၀.၂၅ မီလီမီတာရှိပေမဲ့ပိုကြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်။
con စက်မှုလုပ်ငန်းအထူးသဖြင့်စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအလွန်တိကျသောအရာများကိုတိုင်းတာရာတွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားလာကြသည်။ ထိုအချိန်ကသမားရိုးကျတိုင်းတာမှုများ၊ မီတာများကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်မလုံလောက်ပါ။
မိုက်ခရိုမီတာဝက်အူကဲ့သို့အတိတ်၏တီထွင်မှုများ ဝီလျံ Gascoigne ၁၆၄၀ ခုနှစ်များက၎င်းတို့သည် calibers များတွင်သုံးသော vernier သို့မဟုတ် vernier အတွက်တိုးတက်မှုတစ်ခုကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ နက္ခတ္တဗေဒသည်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်တိုင်းတာရန်ပထမ ဦး ဆုံးကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဤတူရိယာအမျိုးအစားအတွက်အခြားပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့်တိုးတက်မှုများလာလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်လိုပဲ Jean Laurent Palmer၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင်သူသည်ပထမဆုံးလက်ကိုင်မိုက်ခရိုမီတာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တီထွင်မှုကို ၁၈၆၇ တွင်ပါရီ၌ခင်းကျင်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၁၈၆၈ တွင်အမြောက်အများအတွက် tool တစ်ခုအဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော Joseph Brown နှင့် Lucius Sharpe (Joseph Brown and Lucius Sharpe) တို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ၀ န်ထမ်းများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုတိကျသောကိရိယာတစ်ခုအပေါ်ယုံကြည်နိုင်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် ၁၈၉၀ အထိအမေရိကန်စီးပွားရေးသမားနဲ့တီထွင်သူဖြစ်မလာခဲ့ဘူး Laroy Sunderland Starrett micrometer ကိုအဆင့်မြှင့် တင်၍ ၎င်းထက်ပိုသောလက်ရှိပုံစံကိုမူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ယနေ့ခေတ်တိုင်းတာရေးအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများအနက် Starrett ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အထက်ပါပုံတွင် Palmer caliper သို့မဟုတ် micrometer ၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ဖြစ်ကြပါတယ် အပိုင်း သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
1. ကိုယ်ခန္ဓာ: ၎င်းသည်ဘောင်ပြုလုပ်သောသတ္တုအပိုင်းအစဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အပူအပြောင်းအလဲများနှင့်များစွာကွဲပြားခြင်းမရှိသောအရာတစ်ခုမှဖန်ဆင်းသည်၊ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောတိုင်းတာမှုများကိုပြုလုပ်စေနိုင်သဖြင့်၎င်းသည်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
2. Tope: သည်တိုင်းတာမှု၏ဘ ၀ ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသံမဏိကဲ့သို့မာကျောသောအရာနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရေးကြီးသည်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်ပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
3. ဆူး: ၎င်းသည်မိုက်ခရိုမီတာ၏တိုင်းတာမှုကိုဆုံးဖြတ်မည့် mobile element တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ဝက်အူကိုလှည့်သည့်အခါ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရသည်အထိရွေ့လျားစေသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိပ်နှင့်ဆူးကြားအကွာအဝေးကိုတိုင်းတာလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းကိုအများအားဖြင့်ထိပ်နှင့်တူသောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
4. လီဗာပီပြင်သည်: သင်တိုင်းတာရန်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖယ်ရှားလိုက်လျှင်တောင်မှမရွေ့နိုင်အောင်တိုင်းတာရန်ပြင်ဆင်ရန်ဆူး၏ရွေ့လျားမှုကိုသင်ပိတ်ဆို့ခွင့်ပြုသည်။
5. ခွေးရူး: ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်တိုင်းတာမှုကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါအင်အားကိုကန့်သတ်မည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအလွယ်တကူချိန်ညှိနိုင်သည်။
6. မိုဘိုင်းဗုံဤနေရာတွင်မီလီမီတာဆယ်ဂဏန်း၌အမှန်ကန်ဆုံးတိုင်းတာမှုကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ vernier ရှိသူများသည်ပိုမိုတိကျသည့်အတွက်နောက်ထပ်ဒုတိယစကေး၊ မီလီမီတာ၏ထောင်ဂဏန်းပင်ရှိလိမ့်မည်။
7. ပုံသေဗုံ: ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောစကေးကိုမှတ်သားသည်။ မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုစီသည်တစ်မီလီမီတာဖြစ်ပြီး၊ ပုံသေစည်အမှတ်အသားများပေါ် မူတည်၍ တိုင်းတာလိမ့်မည်။
palmer micrometer သို့မဟုတ် caliper ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
မိုက်ခရိုမီတာတွင်ရိုးရှင်းသောနိယာမရှိသည်။ ၎င်းသည်တစ် ဦး အပေါ်အခြေခံသည် သေးငယ်သောနေရာများအားပြောင်းလဲရန်ဝက်အူ ၎င်း၏စကေးအတွက်တိကျသောအတိုင်းအတာဖြင့် ဤ tool အမျိုးအစားကိုသုံးသောသူသည်တိုင်းတာရန်အရာ ၀ တ္ထု၏မျက်နှာပြင်များနှင့်အဆက်အသွယ်မရမချင်းဝက်အူကိုချည်နိုင်လိမ့်မည်။
ဘွဲ့ရဗုံပေါ်တွင်အမှတ်အသားများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤ micrometers များစွာတွင်aပါ ၀ င်သည် vernier၎င်းသည်သေးငယ်သည့်စကေးထည့်သွင်းမှုကြောင့်အပိုင်းကိန်းများနှင့်တိုင်းတာမှုကိုဖတ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သမားရိုးကျ caliper ဒါမှမဟုတ် caliper နဲ့မတူတာက Palmer ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအတိုင်းအတာ အချင်းသို့မဟုတ်အရှည်အပြင်ဘက်မရ။ သမားရိုးကျတိုင်းတာမှုတွင်လည်းအချင်းများနှင့်အနက်များကိုတိုင်းတာနိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်အပိုင်း၌သင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်း၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သောအမျိုးအစားအချို့ရှိသည်။
အတော်ကြာ micrometer အမျိုးအစားများမရ။ စာဖတ်ပုံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်။
မက္ကင်းနစ်၎င်းတို့သည်လုံး ၀ လက်စွဲဖြစ်သည်၊ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအတိုင်းအတာကိုဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့်ဖတ်ခြင်းပြီးသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်၎င်းတို့သည်စာဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် LCD screen ပါ ၀ င်သောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲနိုင်သည် ယူနစ်အမျိုးအစား အလုပ်ခန့်ထားသော
ဒဿမစနစ်မီလီမီတာ (သို့) မီလီမီတာများနှင့်၎င်း၊ မက်ထရစ်စနစ်ကိုသုံးသည်။
သူတို့တိုင်းတာတဲ့အရသင်ကဲ့သို့ micrometers များကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
နက်နဲသည်၎င်းတို့သည်မှတ်တိုင်နှစ်ခု (သို့) မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ငြိမ်နေသောခြေထောက်ပါ ၀ င်သောအထူးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဆူးသည်အောက်ခြေကိုထိရန်အောက်ခြေကိုထောင့်ဖြတ်ထွက်လာစေပြီးအောက်ခြေကိုတိကျစွာတိုင်းတာသည်။
မိုးလုံလေလုံ၎င်းတို့သည်ပြွန်တစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့အကွာအဝေး (သို့) အတွင်းပိုင်းအချင်းများကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန်အဆက်အသွယ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြင့်လည်းပြုပြင်ထားသည်။
သငျသညျလိုလျှင် အရည်အသွေးနှင့်တိကျသော micrometer ကို ၀ ယ်ပါဤတွင်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့်အကြံပြုချက်အချို့မှာ -
Proster analog ပြင်ပ micrometer (၀.၂၅ မီလီမီတာ ၀.၁ မီလီမီတာဘွဲ့ရပြီး).
Beslands ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြင်ဘက်မိုက်ခရိုမီတာ (၀.၂၅ မီလီမီတာနှင့် ၀.၀၀၁ မီလီမီတာဘွဲ့ရ) LCD display နှင့်အတူ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ယေဘုယျ » Micrometer: ဒီ tool အကြောင်းသင်သိဖို့လိုအပ်သမျှ